Kwete Gauges mu 777-200ER mushure mekutsvaga Pakupedzisira purogiramu.
mubvunzo Kwete Gauges mu 777-200ER mushure mekutsvaga Pakupedzisira purogiramu.
1 gore 4 ago #794 by courtmtx
Mushure mokuisa 7770200ER muFSX yangu, majiji acho ose akaomeswa kunze mugomba rejubhi uye cockpit chaiyo.
1 gore 4 ago #795 by Dariussssss
Chikanganiso chakanyatsozivikanwa. Iwe unoda kuisa Gauges recovery tool. Unogona kuzviwana pano pa Rikoooo. Ndicho chigadziri saka, zvose zvinowanda nyore nyore.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: courtmtx
1 gore 4 ago #798 by courtmtx
I "Gauges Recovery Tool" haina kubatsira nedambudziko. Ndiri kuongorora reloading ye 777-200ER kana kuti zvimwe FSX.
Time chokusika peji: 0.376 mumasekonzi